Izindaba - Ingabe udinga ukugqoka amagilavu ​​lapho wenza imishini ngo-2022?
Centre Drive lathe For Coupling
Umshini Wokugaya Wohlobo lwe-Gantry 5-eksisi
Namuhla, izisebenzi eziningi ezisebenza ngomshini zigqoka amagilavu ​​ezandleni zazo lapho zisebenza, ukuze zigweme ama-flash noma ama-iron chips asemaphethelweni omkhiqizo ekusikeni izandla.Kuyiqiniso ukuthi abantu abenza umsebenzi wokwenza imishini abatholi mali etheni, bagcina sebenowoyela omningi, ama-iron chips nezibazi zama-burrs ezandleni zabo.Kodwa akekho okwenzayo.
Ngikhumbula ukuthi eminyakeni yokuqala, izisebenzi ezazisebenza efektri zazihlonyiswe ngokukhethekile izicathulo zomshwalense wensimbi ezenziwe ngumphathi.Lapho ziya emsebenzini, zonke izisebenzi kwakudingeka zigqoke amakepisi okusebenza, izingubo zokusebenza nezicathulo zomshwalense wensimbi ezinyaweni zazo.Uma ungayigqoki uzohlawuliswa njalo uma uyitholile.
Kodwa amafekthri amancane anamuhla nezindawo zokusebenzela azinazo izicathulo zensimbi, izingubo zokusebenza, namakepisi okusebenza.Ngokuvamile, abasebenzi baba nepheya lamagilavu ​​e-gauze kuphela lapho beya emsebenzini.Izinto okufanele zisetshenziswe azikaze zisetshenziswe, futhi izinto okungafanele zisetshenziswe bezilokhu zikhona.lokho akufanelekile ngempela
Kodwa noma kunjalo, ukuphepha emsebenzini akuwona umdlalo.Imishini ejikelezayo enesivinini esiphezulu ayivunyelwe neze ukugqoka amagilavu.
Ukugqoka amagilavu ​​kuyingozi kakhulu uma usebenzisa umshini wokugaya.Amagilavu ​​ayebhajwa ngokuqinile lapho nje ethinta umshini.Ukube amagilavu ​​abegqokwa abantu, bekuzothinteka neminwe yabantu.
Ngakho-ke, khumbula ukuthi ukugqoka amagilavu ​​ukuze usebenzise imishini ezungezayo kuyingozi enkulu, futhi kuthambekele kakhulu engozini yokusonteka ngesandla.Ukungawagqoki amagilavu ​​kungabangela ukuhlukumezeka kwesikhumba, kodwa ukugqoka amagilavu ​​kunemiphumela emibi kakhulu.
Isikhathi sokuthumela: Jun-02-2022